Ukuqaphela ubuso be-2d, ukubonwa kobuso be-Ai, umatshini wokuzimasa-WEDS
ABAMELI BETHUISIXHOBO ESIQINISEKILEYO
Kukho abathengi abazithandayo kwaye bathengisa ngokudumileyo kwimarike.
Ibhinocular Facial Terminal(WEDS-N8)
I-8 "i-LCD ye-interactive touch LCD enobuchwephesha obuphezulu be-WDR kunye neqonga lokusebenza elinamandla lokuqinisekisa ukusebenza ngokuzinzile kwabasebenzisi, enokusetyenziswa ngaphakathi nangaphandle kwiimeko ezahlukeneyo. Ukungangeni kwamanzi kunye nothuli, ukuvuka kwe-auto ngaphakathi kwe-2.5 yeemitha. I-SDK kunye ne-API yojongano olufanelekileyo lwesibini .
SIZA KUQINISEkisa ukuba
HLALA UFUMANAiziphumo ezingcono.
Inkampani isoloko ilandelelanisa kunye neengcali ukusuka ekuthengisweni kwangaphambili, ngexesha lokuthengisa ukuya emva kokuthengisa ukuqinisekisa ukufezekiswa kweenkonzo zokufika ezidibeneyo.Ukusuka kuyilo lwenkangeleko ukuya kwisoftware kunye nophando lwehardware kunye nophuhliso, imveliso yokuyeka enye, inkxaso yeenkonzo zokwenza ngokwezifiso.Inkampani iseka abafowunelwa kunye namawakawaka amahlakani kwihlabathi liphela ngokusekwa kwegama layo, i-ODM, i-OEM kunye nezinye iimodeli zoshishino.Ngaphezulu kweminyaka engama-20, sinikezele ngezona mveliso zisemgangathweni ophezulu kunye neenkonzo kumawaka abasebenzisi beshishini.
Ngaphezulu kweminyaka engama-24 yophuhliso kunye noqokelelo kwitekhnoloji engundoqo yokuchonga itekhnoloji.
Indawo eyongezelelekileyo yophuhliso lweqhinga elitsha, uphando lweqela le-R&D kunye nokwandiswa kwesikali soshishino.
Ilizwe elithumela ngaphandle
Nge-OEM ODM kunye neendlela ezahlukeneyo zentsebenziswano yoshishino, iimveliso zeWEDS zidume kwihlabathi liphela.
Ngemveliso emanyeneyo kunye neqela lobuchwephesha ukubonelela abasebenzisi ngeemveliso ezibaluleke ngakumbi kunye neenkonzo.
Izinto Eziluncedo Zethu Ezikhethekileyo
Ukukunceda Ukwandisa Inzuzo
Isizathu Sokuba Sinako
Inkonzo ye-WEDS ODM kunye ne-OEM eneminyaka engaphezu kwama-20 yamava oshishino kunye neqela leenjineli ezingaphezu kwama-90, siya kuqinisekisa ukuba iprojekthi yakho ikhuselekile.
Ubuncinci bomthamo osezantsi kwishishini
Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza emva komyalelo
Iimveliso ezingakumbi zokuzenzela eziyimfuneko
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yamava kushishino, siyaziqonda iimfuno zabathengi bethu kwimarike.Sidla ngokubazi ngcono abasebenzisi bethu kunamaqabane ethu.
I-MOQ esezantsi: Sixhaswa yikhonkco lokubonelela olomeleleyo, njengoko besisebenza nabanikezeli bethu ubuncinci iminyaka eli-10, sithembana kwaye siyaxhasana.
Ixesha lokuhambisa ngokukhawuleza: Sivelise iintlobo ezininzi zeebhodi eziphambili kwangaphambili ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi abahlukeneyo ngokukhawuleza.
Ukwenziwa simahla ngakumbi: Kwicandelo lokuchongwa okukrelekrele, siye sakwazi ukudibanisa ngokukhululekileyo iindlela ezininzi, nangona iyimveliso enye, sisenokwenza ukuba ithathe iindlela ezahlukeneyo.
Karlyn ukutya Singapore Partner
Ndadibana ne-WEDS kumboniso xa ndifumana umyalelo osekelwe kwiprojekthi kunye nexesha elihamba phambili le-45, kwaye bandinika i-POC prototype ukuvavanya iimpawu ezifunekayo kwiprojekthi, kwaye ndahlawula imali yesiko kwi-WEDS yokwakha imveliso. kwiprojekthi yam.Iyamangalisa!Bazise zonke iimveliso ezifanelekileyo ngeentsuku nje ezingama-32.
UDavid Mcconnaughey iUnited States Partner
Enkosi ngokundimema!Mna noWEDS sisebenza kunye kangangeminyaka eli-11.Eyona nto ndiyithembayo kakhulu ziimveliso ezidityanisiweyo zeemowudi ezininzi zeWEDS.Ndakhe ndacela i-WEDS ukuba yenze ngokwezifiso uluhlu lweemveliso ukuhlangabezana nabathengi abahlukeneyo, nangona zibukeka zifana, imodeli nganye kuluhlu lubumbeko olwahlukileyo.Iimodeli ezahlukeneyo zixabiswa ngokwahlukileyo, okufanelekileyo ngokwaneleyo.
UCarlton Scherich France Partner
Ishishini lam libonelelwa kakhulu ngezisombululo kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa kubathengi bam yeyona nto ndiyixabisa kakhulu.Nanini na ndinengxaki, i-WEDS ihlala iqala ukundinika inkxaso yobugcisa kwaye ixoxe ngendlela yokusombulula ingxaki kunye nangona ixesha labo lendawo li-2: 00 pm Oku kundinika ukuzithemba okukhulu rhoqo xa ndisiya kuthetha nomthengi.
Ukubuza kuluhlu lwamaxabiso
Ukusukela ekusekweni kwayo, umzi-mveliso wethu uphuhlisa iimveliso zodidi lwehlabathi ngokubambelela kumgaqo womgangatho kuqala.Iimveliso zethu ziye zafumana igama elihle kakhulu kwishishini kunye nokuthembeka okuxabisekileyo phakathi kwabathengi abatsha nabadala..
mvanjeiindaba & blogs
Nangona imeko yobhubhane e-China iye yalawulwa ngokufanelekileyo, kodwa kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba ukuthintela kunye nokulawula ubhubhane kusengakhathali.Wit...
Shandong Well Data Co., LTD.Phumelela ngo-2021 "Impilo kwaye Uyonwabele eYantai" inkwenkwezi yeshishini ibhrendi NgoJuni 19, "Ukukhanya kohlobo kunye namandla eYantai" ngo-2021 Yan...
Izikhokelo zothintelo lobhubhane kwiikholeji zolawulo lokufikelela kukhuseleko
Okwangoku, iikholeji kunye neeyunivesithi kwilizwe lonke sele zibuyele esikolweni emva kwenye, kwaye ukuthintela ubhubhane kunye nolawulo lujongene nomjikelo omtsha womngeni ...